Betsaka ny manahy hala-bato avy amin’ny fampiasana ny bileta tokana saingy efa izay aloha ny lamina sy ny lalàna manan-kery ary tsy afaka ny hihemotra intsony. Ny fanaraha-maso ny vato no mila hamafisin’ny kandidà tsirairay avy mba hialana amin’ny ahiahy izay mety hiteraka korontana.
Ramatoa iray no nianjera tampoka teo Ambondrona ary torana tsy nahatsiaro tena intsony. Noheverina ho mbola niaina izy teo kinanjo efa namoy ny ainy. Nentina teo amin’ny mpitsabo tsy miankina teo amin’ny manodidina teo mba hanavotana ny ainy saingy tsy avotra intsony. Enimpolo taona katroka ilay ramatoa ary mpampianatra ny asany, raha araka ny hita tao anatin’ny kara-panondrony. Heverina ho avy niantsena koa izy ary mba nividy firavaka kely, anisan’ny hita tao anaty poketrany.
HALATRA AMIN’NY FIARA
Taorian’ny pare-brise, ny batterie, izao dia ny bokotra fibaikoana fitaratra indray no hataon’ny jiolahy lasibatra. Mba hahazoana ireo bokotra kely miisa efatra dia vakian’izy ireo mihitsy ny varavaram-pitaratry ny fiaran’olona. Bokotra izay raha misy mividy ambony indrindra angamba dia arivo ariary kanefa ny fitaratry ny olona an-tapitrisany ary mety tsy hisy vaovao akory aza. Midina tanteraka ilay toe-tsaina eto an-drenivohitra.
TOMPONA GAZETY HIAKATRA FITSARANA
Anio no hiatrika fitsarana ny tompon’ny gazety iray fanta-daza. Ny antony dia ny fitorian’ny mpiasa vavy iray tao aminy izay voaroaka noho ny fandehanany tany andafy kanefa tsy nomen’ny orinasa alalana. Vao tafaverina izy dia noroahina ary mba ho valifatiny dia nametraka fitoriana noho ny antony hafa mihitsy dia ny karama tsizarizary sy ny tsy fanarahana ny lalàn’ny asa, anisan’izany ny tsy fisian’ny taratasy fifanarahana.
FANDRIAMPAHALEMANA ANY MENABE
Ny fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana no nanapa-kevitra ny hitondra sy hiantoka mpitandro ny filaminana mba hamerina ny fandriampahalemana any Menabe. Omaly no niainga ny valopolo lahy avy amin’ny mpitandro ny filaminana izay hiantohana ny rehetra. Mahamenatra izany satria asa tokony hataon’ireo andavanandro ny fampandriana ny fahalemana kanefa dia tsy afa-mihetsika raha tsy misy mpamatsy vola.
ARTISTA TSY NAHAZO VISA
Artista fanta-daza miisa efatra no tsy nomen’ny kaonsilin’i Frantsa eto Madagasikara Visa. Anisan’izany i Mr Sayda izay anisan’ny ankafizin’ny tanora tokoa amin’izao fotoana. Amin’ny mpanara-baovao sy mpankafy azy ireo dia fanambaniana ny Malagasy tanteraka ny toy izao. Niverim-potsiny ireo artista efatra izay marihina fa efa maty paika ny fandaminana amin’ny hetsika izay saika hataon’izy ireo any Lafrantsa. Asa izay fantiantoka mety hahazo ny mpikarakara amin’ity raharaha ity.